काजु खेति कसरी गर्ने ? सम्पुर्ण जानकारी सहित पढ्नुहोस र शेर गर्नुहोस – Dailny NpNews
काजु खेति कसरी गर्ने ? सम्पुर्ण जानकारी सहित पढ्नुहोस र शेर गर्नुहोस
प्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख १९, २०७८ समय: १२:०१:५३
काजु साधरणतया ३ देखि ५ वर्षसम्ममा फुल्न र फल्न थाल्दछ । फुलहरु हागाको टुप्पोमा लाग्दछ्न । भालेपोथी भाग भएका फुलहरु २०-२२ प्रतिशत हुन्छन तर फल ४-५ प्रतिशतमा मात्र लाग्छ । फुल बिहान ७ देखि दिउसो ३ बजेसम्म फुल्छ । बास्नादार फुल फुल्ने हुदा माहुरी र अन्य किरा आकर्षित भैई परागसेचनमा मद्दत पुर्याउछ्न । फल झर्ने समस्या समाधानको लागि हर्मोन एन .ए.ए २, ४- डि (१० पि.पि.एम) छर्न सकिन्छ।